लामो समयदेखि कर नतिर्ने व्यवसायीलाई व्याज मिनाहा « MNTVONLINE.COM
लामो समयदेखि कर नतिर्ने व्यवसायीलाई व्याज मिनाहा
डडेल्धुरा । डडेल्धुरा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर नतिर्ने व्यवसायीलाई ब्याज मिनाह गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि कर विवरण नबुझाएका व्यवसायीलाई जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज नपर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले सूचना जारी गर्दै विसं २०७५ असार मसान्तसम्म भ्याट विवरण पेश नगर्ने करदातालाई यस वर्षको फागुनसम्मको समय तोकेको छ । विसं २०७७ फागुन मसान्तभित्र कर विवरण बुझाएमा तिर्नुपर्ने जरिवाना, थप दस्तुर र पाँच प्रतिशत व्याजसमेत नतिर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
अगामी फागुन मसान्तसम्म मात्र योजना रहेको र यसको लाभ उठाउन व्यवसायीलाई आह्वान गरिइएको छ । यसैबीच कार्यालयले कर नबुझाउने ७४ जना व्यवसायीको सूची सार्वजनिक गरेको छ । सूचीमा अमरगढी नगरपालिका प्रमुखलगायत विभिन्न व्यक्ति रहेका जनाइएको छ ।
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘प्रतिगमन’लाई परास्त गर्नका लागि आफु टाउको फुटाउन पनि तयार रहेको बताएका छन् । दाहाल–नेपाल समूहको
संसद विघटनविरूद्धको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा, भोली अर्को बहस हुने
‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन’
झोलुङ्गे पुलको नामाकरण गर्नेलाई २५ हजार दिइने, कसरी पठाउने नाम ?
सुनको मूल्यमा गिरावट, कति छ आजको भाउ ?
पहिलो श्रीमान्लाई छाडेर दोस्रो विवाह : दुई पक्षको झडप हुँदा गर्भवती महिला घाइते